Commis - I (Bakery) | Shwe Gandamar International Trading ﻿
Commis - I (Bakery)
26.10.2018, Full time , Retail / Wholesale
Company: Shwe Gandamar International Trading
The vision is to open 10 to 20 more outlets in the next five years under the trade names of Gandamar Wholesale (Yangon/ Mandalay/ Meiktila), Ruby Mart (Yangon/ Pyin Oo Lwin), Distribution Division and Gandamar Grand Ballroom and it shall be achieved as planned.Shwe Gandamar International Trading Limited was set up in 2010 and has striven to begin one of the biggest retail and wholesale business in Myanmar.
•	မိမိတာဝန်ယူထားသော မုန့်အမျိုးအစားများအား အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်။
•	မုန့်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်
•	ပုသိမ်မြို့၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်းရှိ မြ၀တီဘဏ်နှင့်ကပ်လျက် အဆောက်အဦးတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် Gandamar Grand Ballroom (Pathein)နှင့် Gandamar Cafe (ကိတ်မုန့်ဆိုင် နှင့် စားသောက်ဆိုင်) တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
•	အသက် (၂၀)နှစ် မှ (၃၀)နှစ်အတွင်း ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
•	ပညာအရည်အချင်း အနိမ့်ဆုံး အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့် ရှိရမည်။
•	မုန့်ဖုတ်သည့်အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
We offer •	Male or Female
•	Salary Negotiable
Work location Gandamar Whole sales Lay daung kan street,Yangon, Myanmar
State/District: Ayeyarwady Region
Job details Job Category: Food & Beverages/Bakery Jobs
Job Function: Commis - I (Bakery)
Job posted: 26/10/2018
Shwe Gandamar International Trading
116 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	အစားအစာအမျိုးမျိုးအပြင် (ကြက်ဆီထမင်း၊ ထောပတ်ထမင်း ကို အထူး) ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာချက်ပြုနိုင်ပြီး အရသာပုံမှန်ထိန်းနိုင်ရမည်။ •	ချက်ပြုတ်သည့်ဟင်းပွဲများ အရသာကောင်းမွန်မှုရှိစေရန်၊ကျန်းမာေ ...
The vision is to open 10 to 20 more outlets in the next five years under the trade names of Gandamar Wholesale (Yangon/ Mandalay/ Meiktila), Ruby Mart (Yangon/ Pyin Oo Lwin), Distribution Division and Gandamar Grand Ballroom and it shall be achieved as planned.
Shwe Gandamar International Trading Limited was set up in 2010 and has striven to begin one of the biggest retail and wholesale business in Myanmar.
Job ads in Food & Beverages/Bakery Jobs and in Ayeyarwady Region
Chef Departie (Bakery)
•	ကိတ်မုန့်၊ ပေါင်မုန့် ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်နိုင်ရမည်။ •	မိမိတာဝန်ယူထားသော မုန့်အမျိုးအစားအားလုံးအား အချိန်မှီရောင်းချနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ပေးရမည်။ •	မိမိထုတ်လုပ်သော မုန့်များအား စားချင်စဖွယ်ဖြစ်စေ� ...
Sous Chef (Bakery)
•	ကိတ်မုန့်၊ ပေါင်မုန့် ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်နိုင်ရမည်။ မုန့်အမျိုးအစားစုံလင်စွာအား စားချင်စဖွယ်ဖြစ်စေရန်၊ အရာသာ၊ •	အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စေရန်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စေ� ...
•	အစားအစာများချက်ပြုတ်ရာတွင် စားဖိုမှူးအား အကူအညီပေးရမည်။ •	စားသုံးသူမှာကြားမှုများ မြန်ဆန်စွာချက်ပြုပြီးစီးစေရန်အတွက် အလေးထားကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။ •	အစားအစာချက်ပြုတ်သည့်နေရာအား သန့်ရှင်းသပ်ယပ် ...
•	Good communications for customers •	Good ability for team work •	Good looks performance, manner and character
•	စကားပြော ချိုသာပြေပြစ်ရမည်။ စိတ်ရှည်သည်းခံရမည်။ •	Customer Service ကောင်းမွန်စွာပေးနိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၊ အရည်အချင်း ပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေးမည်။ •	(ပုသိမ်မြို့ Gandamar Grand Ballroom တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်)
Job ads in Hotel & Restaurant Jobs and in Ayeyarwady Region
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး၊ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့/ည အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၊ အရည်အချင်း ပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေးမည်။ •	(ပုသိမ်မြို့ Ga ...
Job ads in Security & Safety jobs and in Ayeyarwady Region
•	စကားပြောပြေပြစ်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ရမည်။ •	စိတ်ရှည်သည်းခံရမည်။
•	ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း ကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ •	သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်အတိုင်း အလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Job ads in Security & Safety jobs and in Yangon Region
124 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး၊ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
144 Days, Full time , Retail / Wholesale
207 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	မိမိတာဝန်ယူထားသော မုန့်အမျိုးအစားများအား အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်။ •	မုန့်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် •	ပုသိမ ...
•	Microsoft Excel ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	Accounting Software အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ပုသိမ်မြို့၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်းရှိ မြ၀တီဘဏ်နှင့်ကပ်လျက် အဆောက်အဦးတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် Gandamar Grand Ballroom (Pathein)နှင့် Gandamar Cafe ( ...
Job ads in Accountancy Jobs and in Ayeyarwady Region
228 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	Good Computer Literacy in Microsoft and accounting Software. •	Able to work under pressure and can handle the task well. •	Good personality and communication skill.
PO Clerk (Purchasing Order Clerk)
229 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	ဆိုင်ခွဲများတွင် လိုအပ်နေသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အ၀ယ်အော်ဒါ (Purchasing Order)များ •	Software တွင် ထည့်သွင်းပေးရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းအတွက် ပြင်ပသို့သွားလာနိုင်ရမည်။ •	အများနှင့်ပူး� ...
M&E Assistant & Assistant Supervisor
•	မနက်အဆိုင်း၊ ညအဆိုင်း အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ပါက အချိန်ပိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းေ� ...
•	Good personality, Communication& Coordination Skills. •	Prepare reports and statistics to assist HR manager and Senior Management in their review of data. •	Arrange the staff uniform. •	Maintain the personal records of employees on matters such as wages, superannuation, leave and training, and prepare associated management reports.
M&E Assistant Supervisor
•	နေ့/ည အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ပါက အချိန်ပိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ်ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြ ...
Job ads in Maintenance Jobs and in Ayeyarwady Region
IT Assistant Supervisor
•	Good interpersonal skills and communication skills. •	Able to work on shift if needed.
•	လျှပ်စစ်မီး၊ အဲယားကွန်းနှင့်ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ •	လူအများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
Security Senior Supervisor & Assistant Manager( Night Duty )
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ခေါင်းဆောင်မှုစိတ်ဓါတ်အပြည့်ဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များမှ အငြိမ်းစားယူထားသူများအာ ...
Commis - I (Bakery) Food & Beverages/Bakery Jobs jobless Jobsinyangon Shwe Gandamar International Trading Food & Beverages/Bakery Jobs Food & Beverages/Bakery Jobs Commis - I (Bakery) Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Find the best jobs in Hsipaw at www.jobless.com.mm. Apply Online and get job in Hsipaw today. Our Job Specialist will help you to find dream job vacancy in Hsipaw.
Find the best jobs in Kyain Seikgyi (Kyainseikkyi) at www.jobless.com.mm. Apply online and get job in Kyain Seikgyi (Kyainseikkyi) today. Our job specialist will help you to find dream job vacancy in Kyain Seikgyi (Kyainseikkyi)
Work in Yangon (Rangoon)(4859)
Work in Yangon Region(991)
Work in Mandalay Region(480)
Work in Tanintharyi Region(74)
Work in Ayeyarwady Region(64)
Trust Venture Partners Co., Lt...(59)
Myanmar Marketing Research & D...(48)
Eastern Group of Companies(33)
Bakery & Coffee Branch Assistant Supervisor
Amata Hotel Group
Best Western Green Hill Hotel (Yangon)
AEON Orange Supermarket
May Kyi Food Production Co.,Ltd
Tanintharyi Region 22 Days
Tanintharyi Region 43 Days
Yangon Region 81 Days
Commis II & Commis III & Commis
Yangon (Rangoon) 110 Days
Mandalay Region 115 Days
Ayeyarwady Region 116 Days
Yangon (Rangoon) 117 Days
Yangon (Rangoon) 165 Days
Seasons Bakery Incharge
Yangon (Rangoon) 230 Days